Nzvimbo Nhatu Unofanira Kushanyira Pakufamba Kwenzira MuFrance
France ndiyo nyika yakagadzirwa nenzira yakanaka yemugwagwa, ine nzira yakanaka yekubatana uye nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushanyira. Zvichida zvaunofarira zviri muwaini yakaisvonaka, zviitiko zvekunakidza kana zvishamiso zvekuitika zvenyika zvekare kune nzvimbo dzakawanda dzekushanyira, nepo pane dzimwe nzvimbo dzinonakidza nzvimbo dzekuongorora pamwe chete. Kana uri kufunga nezvekutora rwendo mumugwagwa muFrance, hezvino humwe hutano hwakanaka hwaunofanirwa kufunga kuti kuwedzera pakufamba kwako.
Iko guta guru reFrance ndiko kuti vanhu vakawanda vari kubhururuka kunyika ino vachasvika, uye zvirokwazvo hazvifaniri kuregererwa senzvimbo yekuenda kunotsvaga. Kubva kunoshamisa kereke yeChristmas Dame kusvika kuEiffel Tower yechishamiso, pane zvinhu zvakawanda zvekuona nekushanyira muguta, asi chikafu uye tsika mumuguta zvakanakisa. The Louvre inosanganisira musemu wakanaka kunoshanyira , saka kana iwe unogona kuzvipa nguva yakawanda yekuziva zvose izvo Paris inofanira kupa.
Chinonyanya kuzivikanwa senzvimbo iyo Chibvumirano cheVersailles chakasayinwa chichitevera Hondo Yenyika Yenyika Yese, iyi imba yamambo chivako chinoshamisa chaishanda seimba yeimba yeumambo yeFrance kwemakore anopfuura zana. Nhasi, unogona kutora mahofisi emakamuri uye nzvimbo dzakanaka dziri mukati meimba yamambo, asi minda inogara yakachengetedzwa uye ine tsvina yakawanda yemiti, migwagwa nemvura zvinopa nzvimbo huru yekuongorora.
Munharaunda yekuchamhembe-kumabvazuva kweAlsace, guta iri rakavakirirwa rakavakwa kuti richengetedze muganhu neGermany, pasi pekutungamirirwa nemuumbi wehupfumi Marquis de Vauban. Guta iri mukati mezvigadziro rakarongwa mune grid system, ine nzvimbo yakakura yepamusoro apo iwe unogona kuona chechi huru uye mwoyo weguta racho.
Kunze kwemasvingo, zvikamu zvepasi zvinokwira kuguta iriwo chinhu chinofadza mune imwe yenzvimbo dzinofadza zvikuru dzeUNESCO World Heritage dzinowanikwa muFrance .
Minda yemizambiringa yeRoire Valley inobereka imwe yewaini yakanakisisa inowanikwa pose pose munyika, uye kutyaira muminda yemiti yemizambiringa kunogadzira nzvimbo dzakanaka sechizvarwa chekufamba kwako. Nharaunda yacho inewo imba yakakura yezvigadzirwa zvekare, kusanganisira Chateau d'Azay-le-Rideau, iyo inokwira kubva mumvura yegungwa, uye guru Chateau de Valencay. Iyi inotonhora yezhizha inenge ichinyatsove yakagadzikana kana iwe unotendeuka kuti utyaire nechokumusoro.
Iyi inofadza yepamusoro yemasasa eRoma sezvaizodai yakave panguva yeHondo yeAlesia muzana remakore rokutanga BCis kushanya kunonakidza kunopa ruzivo rwekuona uye rwakavhiringidzika kune izvo zvaunoona nekuverenga mabhuku ezvakaitika kare. Iyi paki inosanganisira matongo akavezwa akavakwa mumusasa weRoma panzvimbo iyi, asi masvingo ekudzivirirwa uye masvingo akashandurwazve. Nezvinobatanidza zvikamu zvemu museum, uye maoko pamusoro pezvakaitika mumusitamende, ichi ndicho chakanakidza kana iwe uchifamba nevana.
Iri guta rakanaka rakavakirirwa reFrance nderimwe rakaratidzwa mumabhuku akawanda ezvakaitika uye ezvokufungidzira, nematombo ematombo uye shongwe dzinodzivirira chikomo cheimba yepamusoro ichiita kuti chive chakanaka. Uyewo nekufamba pamasvingo, unogona zvakare kutsvaga kereke nechechi yepamhedheni, uye kufamba mumigwagwa yakanaka yeguta racho pachako. Guta iri pamwoyo wekambani yewaini yewaini, apo iwe unogonawo kutora ngarava pedyo neCanal du Midi, iyo yakabva muzana remakore rechigumi nemanomwe.
The Palais Ideal Of Ferdinand Cheval
Chimwe chezvitsva zvinonakidza uye zvisingashamisi muFrance iyi imba duku iri pedyo neguta reHauterives kumaodzanyemba kumabvazuva kweFrance, rakavakwa nemutungamiri Ferdinand Cheval munguva yekupera kwegumi nemapfumbamwe uye kutanga kwemazana makumi maviri. Pamwe nezvose zvikamu zvegadziro yakashongedzwa nemhando dzakasiyana dzekuveza nekugadzirisa kwekugadzira, chivakwa ichi chakatora makore makumi matatu nematatu kuti Cheval ipedze, uye inotungamira kubva kune zvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana.
Uyu musha unoyevedza wakavakwa pamusara wepamusoro pamusoro peRwizi Dordogne kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenyika, uye wakatanga kumativi evanamende uye nzvimbo yekufambira nzvimbo iri pamusoro pekumusoro. Kubva kubva musango, guta racho rinoratidzika rakatarisa pamusoro pezvikepe zvinenge zvisingaitiki uye ndeimwe yemisha yakaisvonaka kwazvo munyika, uye nhoroondo inotaura kuti inowanikwa apo mutumbi wechitendero chechitendero chakawanikwa.
Nzira Yokudzivisa Izvo-Inonzi Rude French
Kurwendo Rwokufamba rweNice's Cours Saleya Mucheka uye Mucheka Misika
Villefranche-sur-Mer paCote d'Azur
Dzidzira Kutungamira Mutungamiri kuFrance
Sete iri kumaodzanyemba kweFrance
Cote Vermeille kumaodzanyemba kumavirira kuMediterranean
Magazini eLGBTT uye Newspapers muNew York City
Inofanirwa Intel yeRwendo kuenda kuHawaii
Spring Family Vacation Zvitsva & Mabasa muTexas
Lanzarote - Volcanic Canary Island muAtlantic
Kutarisa Rakanaka Rokufamba Bag Bag? Iyo Minaal Daily Izvo
Silver Spring, Maryland Map and Directions
Enda Ape! Treetop Adventure muPittsburgh
Isla Mujeres Day Trip kubva kuCancun
7 Zvinhu Zvingaitwa muBronx (Beside the Zoo)
Mwenje Inofamba: Chimwe Chishamiso cheKrisimasi paZvondo 34
Indianapolis Theaters uye Performing Arts Venues
Yakawanda Inofambira Chiitiko Iko Unokunda Kurwisa muAfrica